Fanambaran'Andriamatoa Praiminisitra manoloana ny toe-java-nisy teny amin'ny kianjan'ny 13 Mai | Primature
Eo anatrehan’ny toe-javatra nampalahelo niseho androany ka nisian’ny aina nafoy, raha ny tarehimarika ofisialy azonay avy amin’ny mpiasan’ny Ministeran’ny fahasalamana androany dia iray no maty ary 17 no naratra. Amin’ny anaran’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, amin’ny anaran’ny Governemanta ary amin’ny anarako manokana no hitondrako eto ny teny fampiononana ho an’ireo fianakaviana mana-manjo ary mirary fahasitranana ihany koa ho an’ireo naratra.
Ny azonay ambara taorian’iny toe-javatra iny, dia tsy maintsy hanao ny fanadihadiana rehetra ny governemanta mba hahafantarana ny tena zava-nisy marina ka nisian’iny famoizana ain’olona iny, ary tsy maintsy hisy ny fanapahan-kevitra hentitra izay ho raisina aorian’ny fanadihadiana.
Tiako ny manambara eto androany fa aoka tsy ataontsika ho fomba mahazatra eo amin’ny fitadiavam-bahaolana maharitra ny herisetra. Ny herisetra dia tsy hitondra vahaolana mihitsy eo amin’ny fiarahamonina, ny herisetra dia vao maika miteraka lonilony ary miteraka fifandrafiana eo amin’ny mpiray monina. Isika Malagasy dia manana ny soatoavina izay mampiavaka antsika, ka azo fehezina amin’ny hoe ny fitadiavana ny marimaritra iraisana. Misy ihany koa ny ohabolana izay hahafahana mamehy izany : “Ny hisavorovoroan-kilatoana, izay tsy miady olom-bodo, izay to fo mpamosavy”, ka eto aho dia manao antso avy amin’ny vahoaka Malagasy rehetra mba ho tony hatrany manoloana izao zava-misy izao. Fa efa mandray andraikitra ary tsy maintsy mandray andraikitra ny fitondram-panjakana.
Manao antso avo ihany koa amin’ny ankolafin-kery politika rehetra ny tenako, na inona na inona mety tsy fitovian-kevitra ara-politika dia aoka tsy atao sakana izany amin’ny fitadiavana ny marimaritra iraisana, satria tsy hitondra vokatsoa ho antsika izao adilahy politika lava izao. Tsy hitondra vokatsoa ho an’ny firenena ny fifandrafiana, fa ny fifanatonana, ny fampanjakana ny firaisankina ihany no hahafahana mamaha ny olana maharitra, ary vonona amin’izany fifampiresahana izany izahay. Vonona hatrany ny Governemanta eo amin’ny fitadiavana ny marimaritra iraisana mba hisian’ny fitoniana maharitra eto amin’ny firenena.
Conseil du Gouvernement du Mardi 24 Avril 2018 →